पार्टी दलाल पुँजीवादको पक्षमा रहेकाे नेता भुसालको आरोप
पार्टी दलाल पुँजीवादको पक्षमा रहेकाे नेता भुसालको आरोप बजेटले परिवर्तनपछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ
जनतापाटी डेस्क मंगलवार, जेठ २१, २०७६, १६:२४:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेकपाका प्रभावशाली नेता घनश्याम भुसाल पार्टीको गलत प्रवृति विरुद्ध खुलेर लागिरहेका छन् । कहिले पार्टीको मूख्य सिद्धान्तमा नै प्रश्न उठाउने उनी कहिले जनतासँग सम्बन्धित भई पार्टीलाई घच्घचाएर चर्चामा आउँछन् । मानौँ, पछिल्लो समय उनी जनप्रिय बन्दैछन्, न कि पार्टी प्रिय ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बसिरहेको थियो । सदा झैं पार्टीलाई प्रश्न तेस्र्याउने भुसाल मंगलबार पनि चुकेनन् । उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकबाटै पार्टीले दलाल पुँजीवादको नेतृत्व गरिरहेको र समाजलाई भ्रष्ट बनाइरहेको आरोप लगाउन भ्याए । आफुलाई थोरै भएपनि बचाउ गर्दै उनले यो कुनै पार्टीविशेषको मात्र चरित्र नभइ आम चरित्र रहेको औँल्याएका थिए ।
'मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु– अर्बभन्दा माथिको भ्रष्टाचार ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र)ले गर्न सक्छ ? यद्यपि कहिलेकाहीँ कारवाही हुँदा त्यही पर्छ । माथिका कम पर्ने गरेका छन् । यसर्थ निःसन्देह भन्न सकिन्छ, ठूला भ्रष्टाचार एक्लै हुँदैन । त्यहाँ राष्ट्रिय सहमति बन्छ । मिलिट्री इन्डस्ट्री नेक्ससजस्तै दलाल पुँजीवाद र परजीवी राजनीतिको नेक्सस छ,' उनले भने ।
बजेटले परिवर्तनपछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले राजनीतिक आयामबाट यसको चर्चा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
'यसो हेर्दाखेरी हामी सत्ताधारी हौँ, शक्ति चलाउनुपर्ने छ, सत्ता चलाउनुपर्नेछ, बजेट बनाउनुपर्नेछ, लागु गर्नुपर्नेछ, अनेक काममा व्यस्त छौँ । प्रतिपक्षले गर्छ भनेको, ऊ त अझै पराजयको पीडाले ब्युँझिएको पनि छैन । यसरी घाइते भएको छ कि, उठेको पनि छैन । उसले अस्ति जनजागरण अभियान चलाउँदै पनि थियो । तर, दलाल पुँजीवादका बारेका कहीँ छलफल भएन । एकदमै खुद्रा–मसिना कुरा गर्छ । दलाल पुँजीवादले हाम्रो जीवनलाई यसरी रगड्छ, त्यसका बारेका कुरा गर्छ कांग्रेसले ? कहीँ गर्दैन,' उनले प्रतिपक्षीलाई आरोप लगाए ।
यसले क्रान्ति, गणतन्त्र, परिवर्तन खतरामुक्त नहुने टिप्पणी उनले गरे ।
२० वर्ष बजेटमा साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च कम हुँदै गएको बताउँदै उनले भने, “अहिले पनि साधारण खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब छ । ४ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत हुनेछ भनेका छौँ । ७४ प्रतिशत साधारण खर्च छ, २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ । यसर्थ यो हाम्रो आत्महन्ता अर्थतन्त्र हो । यसले आफैँलाई खान्छ र जीवनलाई सिध्याउँदै जान्छ ।”
पूर्वाधार निर्माण आर्थिक समृद्धिको आधार अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै समयदेखि भन्दै आएको सम्बृद्ध नेपालको मुख्य आधार रेलको सपना छिटै पुरा हुन्छ भनेर आम नेपाली आशावादी भएका छन् । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि हाल नेपालमा रेल गुढाउनका लागि निकै चासो देखाएको अवस्था छ । आइतवार, बैशाख १, २०७६, १५:५७:००
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो निबन्ध भन्दा फरक छैन: प्रकाशमान सिंह सभामा बोल्दै नेता सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओली उखान टुक्काका लागि निकै राम्रो भएकै कारण पनि नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा राम्रा नारा तय गरिएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘हाईवेमा इमर्जेन्सी प्लेन ल्याण्ड हुन्छ भनेर काम गरेजस्तै, यो नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै छ ।’ मंगलवार, बैशाख २४, २०७६, १२:३४:००
मेलम्चीमा रजगज : दातृ निकाय, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीदेखि ठेकेदारसम्मको स्वार्थ बिहिवार, पुष ५, २०७५, ०८:०८:००
प्रधानमन्त्री ओलीले दिए फ्रान्स र आयरल्यान्डका समकक्षीलाई बधाई
सरिता गिरीलाई सांसद र पार्टी सदस्यबाट हटाउने समाजवादीको निर्णय
सांसद सरिता गिरीलाई सांसद र पार्टीबाट निष्कासन गर्न सिफारिस, समाजवादी पार्टीको बैठक बस्दै
ओली-प्रचण्डबीच छलफल सकियो, भोलि फेरि बस्ने
देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ पुगे जसपा नेता